Radio Don Bosco - Nino an’i Jesoa ireo jamba roa lahy nahiratra
Niantso sy nitalaho famonjena tamin’i Jesoa eto, ireo jamba roa lahy. Nanaraka an’i Jesoa teny an-dalana, ary efa tany an-trano Izy vao namaly azy ireo. Endrik’ilay olombelona nitankaizina fa lavitra an’Andriamanitra Fahazavana, fa endrik’ilay vavaka mila faharetana koa satria tsy baikoin’ny filan’olombelona Andriamanitra fa manana ny fombany, mahefa ny sitra-pony. Ny anjarantsika dia ny mitoky sy miandry am-paharetana.
Notendren’i Jesoa ny mason’ireto jamba ka nahiratra : dia izany no famaritana ny hoe famonjena, Andriamanitra manatsotra tanana amin’ny olombelona. Ilay anarana hoe Zanak’i Davida rahateo moa mitory hoe i Jesoa no Mesia nandrasana hatramin’ny ela.
Tsy maintsy ambara mazava izany finoana izany, izany hoe : i Jesoa no Mpamonjy, ary finoana no tanjona fa tsy hoe fahagagana na fahasitranana fotsiny, ary ny finoana aza no mahatanteraka ny fahasitranana ; ny finoana no nahavonjy. Finoana sy faharetana no tsy maintsy kolokoloina fatratra amin’izao fiavian’ny Tompo izao.